အဆိုပါဟိဂ်နယ်သာလန်အစိုးရ၏ထိုင်ခုံဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်သင်အထင်ကြီးအဆောက်အဦတွေအများကြီးကိုမြင်ရဖို့မြျှောလငျ့နိုငျ. အဆိုပါမြို့ကိုလည်းတရားရေးနိုင်ငံတကာတရားရုံး၏တည်နေရာဖြစ်ပါသည်, အခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည် အရပျကိုတွေ့မြင်ရပါမည်.
သောအမှုဖြစ်ပါသည်သော်လည်း, ဂျာမဏီနေဆဲသွားရောက်လည်ပတ်ထိုက်သည်. သငျသညျ, Cologne သွားဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒါကအထူးသဖြင့်မှန်, အနောက်ဂျာမဏီ၏တစ်ဦးကိုမကြာခဏမေ့လျော့ကျောက်မျက်. အဆိုပါအညီအမျှခမ်းနားရိုင်းမြစ်၏ဘဏ်များအပေါ်ခမ်းနားမြို့သည်မုသာ. ပိုကဘာလဲ, Cologne စီးပွားရေး၏ဗဟိုဖြစ်ပါသည်, ယဉျကြေးမှု, နှင့်အနောက်ဂျာမဏီ၏ခရီးသွားလုပ်ငန်း.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 အမ်စတာဒမ်အားဖြင့်ရထား မှစ. အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-amsterdam%2F ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)